Hery Rajaonarimampianina : « Endriky ny Fisandratana ny fandraisana andraikitra » -
AccueilRaharaham-pirenenaHery Rajaonarimampianina : « Endriky ny Fisandratana ny fandraisana andraikitra »
Notokanana omaly, ny zaridainan’Anosy sy Mahamasina amin’ny endriny vaovao. Tonga nanolotra izany ho an’ny vahoaka sy ny mponin’Antananarivo ny Filohan’ny Repoblika, Hery Rajaonarimampianina.
Tamin’izany indrindra no nilazany nandritra ny lahateny nataony fa endriky ny Fisandratana ny fandraisana andraikitra. Noho izany, raha ny nambarany ihany, tsy afaka hiandry an’iza na iza ny Fitondram-panjakana amin’ny fanomezana zavatra tsara ho an’ny vahoaka.
Nambarany fa hamerenana ny hasin’ny renivohitr’i Madagasikara, ho tanàna maha-te honina sy maha tamàna, sns, no tanjon’ny Fitondram-panjakana izay tarihiny. « Hiandrasana an’iza ny fanamboarana an’Antananarivo ? Andrasana rahoviana ny fanatsarana an’Antananarivo ? Izao isika no manana fotoana, ary manana andraikitra hanamboarana ny renivohitr’i Madagasikara izay hisitrahan’ny rehetra. Manana andraikitra amin’izany fanatsarana sy fanamboarana izany isika. Noho izany indrindra, dia raisina ho adidy ny fanamboarana sy fanatsarana an’Antananarivo, satria taratry ny foto-pisainan’ny mponina ny endriky ny tanàna izay honenany”, hoy ny Filoha Hery Rajaonarimampianina.
Nohamafisin’ny Filohan’ny Repoblika fa tanjona ny fanatsarana ny tanàna. Izany hoe, tsy mijanona ho eto Antananarivo ihany izany fa amina faritra maro manerana an’i Madagasikara. “Tanjona ny fanomezana fahafam-po ny mponina. Noho izany, tsy mijanona eo akory ny fananganana sy fanatsarana fotodrafitrasa ataon’ny Fitondram-panjakana, fa mbola ho maro izany”, hoy ny Filoham-pirenena.
Nanipy hafatra ho an’ireo mpanao politika araka izany, ny Filoha Hery Rajaonarimampianina, fa tokony ho izany fanatsarana izany koa no tanjon’ireo mpanao politika malagasy fa tsy fanakorontanana sy fanapotehana indray ny fiainam-bahoaka sy ny firenena. “Tokony hikatsaka izay mahafinaritra hatrany ny vahoaka isika, fa tsy ny hanapotika indray. Maro ireo fotodrafitrasa sy fanatsarana natao, toa ny fanamboaran-dalana, ny seranam-piaramanidina, ny fiantsonan’ny taksiborosy, ny fanomezana jiro, sns. Noho izany indrindra, dia mampirisika ny rehetra ny tenako hiaro ireny fananana iombonana sy fananam-bahoaka ireny. Manome baiko hentitra aho amin’ny fanasaziana izay minia manimba ireny fananana ireny”, hoy hatrany ny Filoha Hery Rajaonarimampianina.
Na dia tsy nivantana aza androany ny praiministra Mahafaly Olivier Solonandrasana manoloana ny hetsika izay nitranga ny sabotsy teo. Dia hentitra ny fanambarana notanterahin’ny praiministra «tokony hiara- hientana sy hieritreritra ny rehetra tsy ho voakarontana ...Tohiny